मलेसियाबाट आएको शव बुझ्न एयरपोर्ट पुगेका नानीबाबुसहित एक परिवार भावविह्वल ! – Sandesh Press
काठमाण्डाै / राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाज मार्फत मलेसियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको छ । मलेसियामा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका अभिभावकको श”व जहाजले शनिबार ल्याइदिएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा भावविह्वल भएका साना नानी बाबुसहित एक परिवार ! निगमको वाइड बडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकै पटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो।
यो पनि पढ्नुहोस:” शान्ति सेनामा छिमेकी मुलुक भारतलाई पछि पार्दै नेपाल दोस्रो नम्बरमा -संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को शान्ति सेना योगदान गर्ने मुलुकहरुको वरीयतामा नेपाल दोस्रो नम्बरमा उक्लिएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल छिमेकी मुलुक भारतलाई पछि पार्दै नेपालले स्थान सुधार गरेको हो ।
Prevअब सवारी धनीले ब्लुबुक बोक्न नपर्ने, कसरी हुन्छ चेकिङ्ग ?,,हे’र्नुहोस।
Nextआजबाट मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गर्यो, यी ४ राशिलाई बिशेष लाभ, अन्य ८ ले यी उपाय अपनाउनुस
दाँत पहेँलो छ ? उसोभए दुई मिनेटमै चम्किलो बनाउन यो उपाय अपनाउनुहोस् !